“Labadan halyeey ayaa tusaale ii ahaa” – Arthur Melo – Gool FM
“Labadan halyeey ayaa tusaale ii ahaa” – Arthur Melo
Dajiye June 22, 2020
(Barcelona) 22 Juun 2020. Xiddiga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Arthur Melo ayaa xaqiijiyay in halyeeyada reer Spain ee Xavi Hernandez iyo Andreas Iniesta ay u ahaayeen tusaale.
Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Arthur Melo uu tilmaamay in Xavi Hernandez iyo Andreas Iniesta ay u noqdeen tusaale isaga xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta.
Yeelkeede, Arthur Melo ayaa maalmahan lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo kooxda Juventus, laga bilaabo xilli ciyaareedka cusub, isagoo mushaar ahaan u qaadan doono sanadkii 5 million euros.
Halka ay Barca dhankeeda ka shaqeeneyso sida ay kaga heli laheyd dhigeeda Juventus laacibka reer Bosnia ee Miralem Pjanić, xilli uu Arthur Melo diidan yahay inuu qeyb ka noqdo heshiiskan la filayo inuu dhaco.
Arthur Melo ayaa ku biiray kooxda Barcelona sanadkii 2018 isaga oo kaga soo dhaqaaqay kooxda reer Brazil ee Gremio, waxana uu tan iyo xilligaas kula guuleystay horyaalka La Liga ee dalka Spain hal jeer, iyo koobka Spanish Super Cup oo hal jeer ah.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Manchester City iyo Burnley ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Man City oo garoonkeeda Etihad guul weyn ay u qalantay kaga gaartay kooxda Burnley… +SAWIRRO